Vatongi 11 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
11 Zvino Jefta+ muGiriyedhi+ akanga ava murume ane simba, akashinga,+ uye aiva mwanakomana womukadzi pfambi,+ uye Giriyedhi ndiye akabereka Jefta. 2 Mudzimai waGiriyedhi akaramba achimuberekera vanakomana. Vanakomana vomudzimai wacho pavakakura, vakadzinga Jefta, vakati kwaari: “Haufaniri kuva nenhaka muimba yababa vedu,+ nokuti uri mwanakomana womumwe mukadzi.” 3 Naizvozvo Jefta akatiza vana vababa vake, akanogara munyika yeTobhu.+ Varume vaiva vasina zvokuita vakaramba vachiunganira Jefta, uye vaienda naye.+ 4 Kwapera chinguva vanakomana vaAmoni vakatanga kurwa naIsraeri.+ 5 Vanakomana vaAmoni pavakarwa naIsraeri,+ varume vakuru vokuGiriyedhi vakabva vaenda kunotora Jefta kunyika yeTobhu.+ 6 Vakabva vati kuna Jefta: “Uya uve mutungamiriri wedu, tirwe nevanakomana vaAmoni.” 7 Asi Jefta akati kuvarume vakuru+ vokuGiriyedhi: “Hamusi imi maindivenga zvokuti makandidzinga muimba yababa vangu here?+ Zvino mauyirei kwandiri zvamava kutambudzika?”+ 8 Varume vakuru vokuGiriyedhi vakati kuna Jefta: “Ndokusaka zvino tadzoka+ kwauri, handei tose tirwe nevanakomana vaAmoni, uve mukuru wevagari vose vokuGiriyedhi nokuda kwedu.”+ 9 Naizvozvo Jefta akati kuvarume vakuru vokuGiriyedhi: “Kana muchindidzosa kuzorwa nevanakomana vaAmoni, Jehovha akavaisa kwandiri,+ ini ndichava mukuru wenyu!” 10 Varume vakuru vokuGiriyedhi vakatiwo kuna Jefta: “Jehovha ngaave muteereri pakati pedu+ kana zvatichaita zvisiri maererano nezvawataura.”+ 11 Naizvozvo Jefta akaenda nevarume vakuru vokuGiriyedhi uye vanhu vakamuita mukuru nomutungamiriri wavo.+ Jefta akataura mashoko ake ose pamberi paJehovha+ muMizpa.+ 12 Jefta akabva atuma nhume kuna mambo wevanakomana vaAmoni,+ achiti: “Ndinei newe,+ zvawauya kuti undirwise munyika yangu?” 13 Naizvozvo mambo wevanakomana vaAmoni akati kunhume dzaJefta: “Nokuti vaIsraeri vakatora nyika yangu pavakabuda muIjipiti,+ kubvira kuAnoni+ kusvikira kuJabhoki nokusvikira kuJodhani.+ Zvino idzosei norugare.” 14 Asi Jefta akatumazve nhume kuna mambo wevanakomana vaAmoni 15 akati kwaari: “Zvanzi naJefta, ‘VaIsraeri havana kutora nyika yeMoabhi+ nenyika yevanakomana vaAmoni.+ 16 Nokuti pavakabuda muIjipiti vaIsraeri vakafamba nomurenje kusvikira kuGungwa Dzvuku,+ vakazosvika kuKadheshi.+ 17 VaIsraeri vakabva vatuma nhume kuna mambo weEdhomu,+ vachiti: “Ndapota, ndibvumirei kupfuura nomunyika yenyu,” asi mambo weEdhomu haana kuteerera. Uyewo vakatuma shoko kuna mambo weMoabhi,+ asi iye haana kubvuma. VaIsraeri vakaramba vachigara muKadheshi.+ 18 Pavakaramba vachifamba nomurenje, vakaenda vachipota nyika yeEdhomu+ nenyika yeMoabhi, zvokuti vakaenda nechokumabvazuva kwenyika yeMoabhi,+ vakadzika musasa munzvimbo yeAnoni; asi havana kupinda mumuganhu weMoabhi,+ nokuti Anoni yaiva muganhu weMoabhi.+ 19 “‘Pashure paizvozvo vaIsraeri vakatuma nhume kuna Sihoni mambo wevaAmori, mambo weHeshbhoni,+ vaIsraeri vakati kwaari: “Tapota, tibvumirei kupfuura nomunyika yenyu tichienda kunzvimbo yedu.”+ 20 Asi Sihoni haana kuva nechokwadi nokupfuura kwaIsraeri nomunharaunda yake, uye Sihoni akaunganidza vanhu vake vose, akadzika musasa muJahazi,+ akarwa naIsraeri.+ 21 Jehovha Mwari waIsraeri akaisa Sihoni nevanhu vake vose muruoko rwaIsraeri, zvokuti vakavauraya uye Israeri akaita kuti nyika yose yevaAmori vaigara munyika iyoyo ive yake.+ 22 Nokudaro vakaita kuti nharaunda yose yevaAmori kubvira kuAnoni kusvikira kuJabhoki uye kubvira kurenje kusvikira kuJodhani ive yavo.+ 23 “‘Zvino Jehovha Mwari waIsraeri ndiye akadzinga vaAmori pamberi pevanhu vake vaIsraeri,+ asi iwe waivadzinga. 24 Hauzodzingi munhu wose waunoitwa kuti udzinge naKemoshi+ mwari wako here? Munhu wose uyo Jehovha Mwari wedu adzinga pamberi pedu ndiye watichadzinga.+ 25 Zvino uri nani kupfuura Bharaki mwanakomana waZipori, mambo weMoabhi here?+ Akamboita nharo nevaIsraeri, kana kuti akamborwa navo here? 26 Israeri paaigara muHeshbhoni nemataundi ari pasi paro+ nomuAroeri+ nemataundi ari pasi paro nomumaguta ose ari pamahombekombe eAnoni kwemakore mazana matatu, nei musina kubva maabvuta panguva iyoyo?+ 27 Ini handina kukutadzira, asi iwe uri kundiitira zvakaipa nokurwa neni. Jehovha Mutongi+ ngaatonge nhasi pakati pevanakomana vaIsraeri nevanakomana vaAmoni.’” 28 Asi mambo wevanakomana vaAmoni haana kuteerera mashoko aJefta aakanga amutumira.+ 29 Zvino mudzimu waJehovha wakauya pana Jefta,+ akapfuura nomuGiriyedhi nepakati paManase, akapfuura nomuMizpe yeGiriyedhi,+ uye akapfuurira kuenda kuvanakomana vaAmoni achibva kuMizpe yeGiriyedhi. 30 Jefta akabva apika+ kuna Jehovha akati: “Chokwadi kana mukaisa vanakomana vaAmoni muruoko rwangu, 31 munhu achabuda, anobuda mumasuo eimba yangu kuzondichingura pandinodzokera norugare+ ndichibva kuvanakomana vaAmoni, achavawo waJehovha,+ uye ndichapa iyeye sechinopiwa chinopiswa.”+ 32 Naizvozvo Jefta akapfuurira kuvanakomana vaAmoni kuti arwe navo, Jehovha akavaisa muruoko rwake. 33 Akauraya vakawanda kwazvo kubvira kuAroeri kusvikira kuMiniti+—maguta makumi maviri—uye kusvikira kuAbheri-keramimu. Nokudaro vanakomana vaAmoni vakakundwa pamberi pevanakomana vaIsraeri. 34 Jefta akazosvika kuMizpa+ kumba kwake, uye akaona mwanasikana wake achibuda kuzomuchingura achiridza gandira achitamba!+ Zvino ndiye aingova mwana mumwe chete. Aiva asina mumwe mwanakomana kana mwanasikana kunze kwake. 35 Zvino paakamuona, akatanga kubvarura nguo dzake+ akati: “Maiwe, mwanasikana wangu kani! Chokwadi wandiunzira nhamo, iwe ndiwe munhu wandanga ndichiunzira dambudziko. Ini ndashama muromo wangu kuna Jehovha, uye handikwanisi kurega.”+ 36 Asi akati kwavari: “Baba vangu, kana mashama muromo wenyu kuna Jehovha, ndiitirei maererano nezvabuda mumuromo menyu,+ sezvo Jehovha aita mabasa okutsiva pavavengi venyu, vanakomana vaAmoni.” 37 Akati kuna baba vake: “Chinhu ichi ngachiitwe kwandiri: Ndiregei ndiri ndoga kwemwedzi miviri, ndiregei ndiende, ndichaenda kumakomo, uye ndiregei ndisvimhe misodzi nokuda kwoumhandara hwangu,+ ini neshamwarisikana dzangu.” 38 Ivo vakati: “Enda!” Naizvozvo vakamurega achienda kwemwedzi miviri; akaramba achienda, iye neshamwarisikana dzake, achisvimha misodzi nokuda kwoumhandara hwake mumakomo. 39 Pakapera mwedzi miviri akadzokera kuna baba vake, vachibva vaita mhiko yavo yavakanga vamuitira.+ Iye haana kumborara nomurume. Uye wakava murau pakati paIsraeri wokuti: 40 Gore negore vanasikana vaIsraeri vaienda kunorumbidza mwanasikana waJefta muGiriyedhi, mazuva mana pagore.+